घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू फ्लोरन्टिनो लुइस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
अन्तिम अपडेट गरिएको जुन 16, 2020
हाम्रो फ्लोरेंटीनो लुइस बायोग्राफी तथ्यहरूले उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार तथ्यहरू, प्रेमिका, पत्नी, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैलीको पूर्ण कभरेज प्रस्तुत गर्दछ। यो उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण विश्लेषण हो जुन उनको शुरुका दिनहरूदेखि सुरू भयो जबदेखि उनी फेमस भयो।
फ्लोरन्टिनो लुस लाइफ स्टोरी- हेर, उनको जीवनी को अनकटिएको कहानी। ।: Picuki
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ पोर्तुगाली फुटबलरसँग यो छ एन'कोलो कान्टाउसको खेलको शैलीमा शून्य उर्जा। निस्सन्देह यो उपलब्धि, भविष्यमा उनी मध्ये एक को रूपमा क्रमश: देख्दछ विश्वका शीर्ष दस डिफेन्सीस मिडफिल्डर्स.
प्रशंसाका बाबजुद पनि हामीले महसुस गरेका थियौं कि हामीले तयार गरेका फ्लोरेन्टीनो लुस बायोग्राफी पढ्न केवल केही फुटबल प्रशंसकहरू विचार गरिसकेका छन्, र यो एकदम रोचक पनि छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
फ्लोरेंटीनो लुइस बाल्यकाल कहानी:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उनको उपनाम 'Tino' हो, र उसको पूरा नामहरू 'फ्लोरेन्टिनो इब्रिन मॉरिस लुइस' हुन्। पोर्तुगाली फुटबलर अगस्त १ 19 1999। को १ day तारिखमा उनको आमा लाउरा लुइस र बुबा मोरिस लुइस पोर्तुगलको लिस्बन शहरमा जन्मनुभएको थियो।
तल देखाईएको अनुसार, परिवारको ब्रेडविनर पहिलो छोरा र बच्चाको रूपमा जन्मेका थिए जुन उनको सुन्दर आमा र तेज दिदी बुबा बीचको मिलनबाट बाहिर थियो। फ्लोरेन्टिनो लुइस आमाबाबुले उनलाई २० वर्ष नाघिसकेका थिए।
फ्लोरेन्टिनो लुइस आफ्नो परिवारको पहिलो छोरा र पहिलो बच्चाको रूपमा जन्म भएको थियो। ।: IG
टिनो र उनका भाइबहिनीहरूबीचको उमेरको दूरीका कारण, एउटा कुरा अवलोकन गर्न योग्य छ। यो तथ्य यो हो कि फुटबलरले आफ्नो शुरुआती वर्षहरूको पहिलो दशकमा खर्च गरेको हुनुपर्दछ, प्राय: जसो उसको बुबा र आमाको वरिपरि। उसको बच्चा भाई (माथि चित्रमा) सम्भवत २००० देखि २०१० बीचमा नभएको हुन सक्छ।
फ्लोरेन्टिनो लुइस परिवार पृष्ठभूमि:
र सबैभन्दा पहिला, त्यहाँ कुनै रेकर्डहरू छैनन् जुन टिनोलाई संकेत गर्दछ, धनी परिवार पृष्ठभूमिमा हुर्केका थिए। उनी पोर्चुगलको लिस्बन जिल्ला सिन्ट्रा नगरपालिकाको पूर्व नागरिक पसिना मसामामा हुर्केका थिए। तथ्या .्कका अनुसार मसामामा करीव ,30,000०,००० मानिसहरू बसोबास गर्छन्, र फ्लोरेन्टिनो लुइस अभिभावकहरू मध्यवर्गीय घरपरिवारका अधिकांश सदस्यहरू हुने गर्दछन्।
फ्लोरेन्टिनो लुअसका अभिभावकहरू, मसामाका अधिकांश मानिसहरूजस्तै, मध्यमवर्गीय परिवार चलाउँथे। ।: इन्स्टाग्राम
चाँडै, गम्भीर देखिने बुबाले आफ्नो परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने एक तरिका थियो। मोरिस र तिनकी श्रीमती लौरा दुबै औसत पोर्तुगालीजस्तै थिए जसले कहिल्यै पैसाको साथ सled्घर्ष गरेन। फ्लोरेन्टिनोलाई जन्म दिइसकेपछि दुबै प्रेमीहरूले व्यक्तिगत प्रगति र पोर्तुगल र अफ्रिकाका आफ्ना विस्तारित परिवारहरूलाई सहयोग गर्ने बोझ कम गर्न परिवार नियोजन अपनाए।
फ्लोरेन्टिनो लुइस परिवार मूल:
तिनीहरूको दृश्यबाट हेर्दा, यो फुटबलरको आमा र बुबाको पोर्तुगलबाट परिवारको जरा नभएको जस्तो देखिन्छ। यस अनुसार फ्लोरेन्टिनो लुइस विकी पृष्ठ, फुटबलर अफ्रिका बाट आफ्नो परिवारको मूल हो, ठीक अंगोला।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... पोर्तुगाली अन्तर्राष्ट्रिय- लाई मनपर्‍यो हेल्दा कोस्टा र विलियम कार्वालहो अंगोलाबाट पनि तिनीहरूका पुर्खाहरू छन्। अन्तमा, 'लुइस' नामको हुनु भनेको कुनै पनि हिसाबले फ्लोरेन्टिनोसँग सम्बन्धित छैन Luis Suarez.
फ्लोरन्टिनो लुइस जीवनी- फुटबल क्यारियरको उत्पत्ति:
पेशेवर बन्ने बिचार २०० the मा आयो, त्यो सुन्दर विश्व कप वर्ष! त्यसबेला धेरै पोर्तुगाली र अंगोलान परिवारको खुशी खुशी भयो जब २०० countries वर्ल्ड कपको प्रारम्भिक चरणको समूह डीमा दुबै मुलुकमा स्थान पाएको हो। फ्लोरेन्टिनो लुइस बुबाका लागि, यो टूर्नामेन्ट हेर्नुको सट्टा आफ्नो परिवारको लागि एक अवसरको प्रयोग गर्ने बढी थियो।
२०० World को विश्वकप दूरदर्शी बुबाका लागि एक आँखा खोल्ने व्यक्ति थिए जसले आफ्नो परिवारको लागि अवसर देखे। 📷: विकी र आईजी
के तपाईंलाई थाहा छ? ... पोर्तुगालको प्रदर्शन र उनको पुर्तगाली उपनिवेश (अंगोला) को बृद्धिले धेरै परिवारहरूलाई उनीहरूको बच्चाहरूको भविष्य फुटबलको माध्यमबाट हेर्न सुरु गर्यो।
केस, फ्लोरेन्टिनो लुइस आमा बुबा भन्दा फरक थिएन, विशेष गरी उसको बुवाले कल्पना गरे। विश्व कपको एक बर्ष पछि, सानो टिनो (उमेर 7) ले पहिले नै उनको क्यारियरको जग बसाल्न शुरू गरिसकेको थियो।
फुटसल क्यारियर कहानी र पारिवारिक पर्यवेक्षणको लागि आवश्यकता:
२०० World विश्व कपको ठीक पछि, पोर्तुगालका युवा प्रतिष्ठानहरूले बायाँ, दायाँ र बीचमा स्प्रिंग गर्न थाले। फ्लोरन्टिनो लुइस माता-पिताले आफ्नो छोराको क्यारियर शुरू गर्न अलोकप्रिय दृष्टिकोण अपनाउने रणनीति अपनाए। धेरै जसो बच्चाहरू आउटडोर फुटबलमा जान्छन्, दुबै आमाबाबुले आफ्ना छोरालाई कडा अदालतमा खेल्ने फुटबलको प्रकार सुरू गर्नका लागि अनुमोदन गरे, र मुख्यतया घरका भित्र।
भविष्यका फुटबलरले फुटबल कल गर्न सुरु गरेको टोलीसँग खेल्न शुरू गरे टेरेना फुटसल। तल दिइएका प्रमाणहरूले के देखाउँदछ कि मसामा (जहाँ फ्लोरेन्टिनो लुइसको परिवार बसोबास गर्थे) टेरसेनामा पुग्ने पाँच मिनेटको ड्राईभ थियो जहाँ टिनो फुटसलको लागि भर्ना भएकी थिइन। निकटताले फ्लोरेन्टिनोका बुवा र आमालाई उसको प्रगतिमा ध्यान दिएन।
करीव अभिभावकीय पर्यवेक्षणको लागि धन्यवाद, युवा पुर्तगाली कुनै समय मा, फुटसलको रचनात्मक, जटिल संसारमा प्रभाव पार्न शुरू गरे। सत्य यो हो कि इन्डोर फुटबल खेल्दा फ्लोरेन्टिनो लुइसलाई द्रुत आन्दोलन, छोटो पासि,, बल कन्ट्रोल, आक्रामकता, सहनशक्ति र फुर्तिलोपना दिइएको थियो जुन हामी उनलाई आज जान्दछौं।
फ्लोरेंटीनो लुइस जीवनी- फेम कहानी कहानी।
२०० In मा (उनले फुटसल खेल्न थालेको दुई बर्ष पछि), जवान केटा आउट-डोर फुटबल खेल्न तयार भए। अर्को सहज सुरुवात पाउनको लागि, फ्लोरेन्टिनो लुइस अभिभावकले अझै पनी आफ्नो पहिलेको रणनीति कायम राखेका थिए - त्यो हो क्लबबाट परिवारको घरको नजिकमा।
ढोका बाहिर मैदानमा हिर्काउँदै, जवान टीनो मासामाको फ्लोरेन्टिनो लुइसको परिवारको घरबाट करीव २.2.7 किलोमिटर (minutes मिनेट ड्राइभ) शहर क्वेलुजमा अवस्थित रियल एससी (रियल मसामा) का साथ भर्ना भए।
स्विच आउट आउट-डोर फुटबल भुक्तान गरिएको:
रियल खेलकुद क्लुबमा हुँदा, आफ्नो प्रारम्भिक फुटसल अनुभव प्रयोग गरेर यसको अधिकतम लाभहरूको अनावरण गर्न थाले। सानो भिडियो फ्लोरन्टिनो लुइस, तलको भिडियोमा देखाए अनुसार, एक किसिमको फुटबल व्हिज बच्चामा बढेको छ, जसले आफ्ना साथीहरू र विपक्षीहरूलाई गोलहरू दिएका थिए। नबिर्सनुहोस्, जवान केटाले एक पटक सुन्दर गोल उत्सव मनाएका थिए।
ठूला क्लबहरू रेडमा आउँदै थिए:
रियल खेलकुद एकेडेमीमा सर्वश्रेष्ठ बन्नु भनेको एउटा चीज हो। यो तथ्य बाहेक अरु कुनै पुर्तगाली राक्षस उनको खोजीमा एकेडेमीमा छापा मार्न आउँदछ।
सत्य यो हो कि युवा फ्लोरेंटिनो लुइस केवल एक वर्षको लागि रियल स्पोर्ट क्लोबमा टिक्यो पोर्तुगालीको पावरहाउस एसएल बेनफीकाले आफ्नो बुबाको बुवालाई बिन्ती गरे उनीहरूको हस्ताक्षरको लागि जुन उनीहरूले पूरा हृदयले अनुमोदन गरे।
फ्लोरेंटीनो लुइस जीवनी- ख्याति कथामा उदय:
फ्लोरेन्टिनो एसएल बेन्फीका एकेडेमीमा एकीकृत गर्न द्रुत थियो, यो एउटा त्यस्तो उपलब्धि जुन उनले २०१ 2018 मा उडान र colors्गमा स्नातक भएको देखी। स्नातक पछि, पूर्ण मिडफिल्डरले क्लबको वरिष्ठ टोलीमा आफ्नो बाटो लड्ने कोसिस शुरू गर्‍यो। कुनै समय मा, त्यो प्राप्त - मात्र एक वर्ष भित्र।
जब फ्लोरेन्टिनो लुइस क्यारियर अनुसरण गर्नेहरूका लागि हुन्छ, तिनीहरू सबै विश्वास गर्छन् फुटबलर सुपरस्टर्डमको लागि हो। आफ्नो उमेरमा उनका धेरै साथीहरू जत्तिकै उनले बेनफिकालाई प्रिमिरा लीगा, सुपरटाइना आदि जस्ता ठूला ट्रफीहरू स collect्कलन गर्न सहयोग पुर्‍याएका थिए।
१ of बर्षको उमेरमा पोर्तुगाली फुटबलर बिग ट्राफी संकलन गर्न पहिले नै प्रयोग भइसकेको छ। ।: Picuki
२० वर्षको कोमल उमेरमा, फ्लोरेन्टिनो लुइस पहिले नै एक अनुभवी समर्थक जस्तो देखिन्छ, जसको भविष्य अविश्वसनीय रूपमा उज्ज्वल छ। मनपर्‍यो गेडसन फर्नांडीस गरे, जवान केटो आफ्नो बाटोमा राखिएका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न खडा भयो। बेनफीकामा, उनको सफलता आयो छलांग र सीमाहरू.
फ्लोरेन्टिनो लुइस बायोग्राफी लेख्ने क्रममा डिफेन्सिभ मिडफिल्डर अहिले एसएल बेन्फीका उत्पादन लाइनको सबैभन्दा नयाँ प्रतिभा हो। युरोपको शीर्ष क्लबहरू द्वारा छेडिएको, Tino आज सबै भन्दा राम्रोको रूपमा क्रमबद्ध भइरहेको छ टफ स्पोर्टको २०२० वन्डरकिड्स डिफेन्सिअल मिडफील्डर्सका लागि। बाँकी, तिनीहरू भन्छन् (तल उसको हाइलाइट भिडियो सहित), अब इतिहास हो।
Florentino लुइस प्रेम कथा:
पेशेवर फुटबलको विशाल मागहरूको कारण, धेरै युवा खेलाडीहरूले आफ्ना गर्लफ्रेंडहरू मुश्किलले प्रदर्शन गर्छन्। यो, तथापि, पोर्तुगालीको मामला होईन, जसको उत्तम प्रेम कहानी धेरै प्रेरणादायक हो।
पहिले हामी उनलाई परिचय दिन्छौं जो एक पटक एक पत्नी बननु अघि फ्लोरेन्टिनो लुइस प्रेमिका थियो। उनी अरू कोही ब्रूना गेरिरियो हुन्, उनी टिनोलाई विश्वको सबैभन्दा सुखी मानिस बनाउन जिम्मेवार छिन्।
फ्लोरेन्टीनो लुइसकी गर्लफ्रेन्डले वाइफ- ब्रूना गुरेरोलाई बदली। ।: नोभागेन्टे
उनीहरूको सोशल मिडिया टाइमलाइनका अनुसार दुबै राम्रा साथीहरू थिए जो पछि प्रेमी भए। २०१ 2016 को अन्त्यमा उनीहरू डेटि began गर्न थाले। उनका आमा बुबाले पुर्तगाली फुटबलर ब्रुना गुरेरियोलाई स्वीकारेपछि फेब्रुअरी २०२० मा अन्तिम प्रश्न पप्प गर्ने निर्णय गरे। टिनो वास्तवमा एक भव्य शैली मा प्रस्ताव गरियो।
जवान (उमेर २०) उमेरको पप गर्न साहसी थिए जुन उनको उमेरका धेरै फुटबलरहरू गर्न डराउँछन्।
फुटबलरहरूको जीवनी कथाहरू लेख्ने हाम्रो सबै वर्षहरूमा, हामीले देखेका वा सुनेका छैनौं एक युवा फुटबलर (उमेर २०) जसले आफ्नो सment्लग्नता फिल्मको दृश्य जस्तो देखिने बनाउने निर्णय गरेका छन। फ्लोरेन्टिनो लुइस सगाईको सही भिडियो हेर्नुहोस् उनको प्रेमिका ब्रुना- लाई, जुन उनको जीवनले परिवर्तन गर्यो।
Florentino लुइस पारिवारिक जीवन:
एक सफल क्यारियरको रहस्य कडा परिश्रमबाट एक्लै आएको थिएन, तर परिवारको नजिकको थियो। यो एउटा परिवार हो जुन सधैं एक अर्काको लागि हुन्छ र उनीहरूको प्रेममा एकजुट हुन्छ। यस जीवनी भागमा, हामी तपाईंलाई फ्लोरेन्टिनो लुइस अभिभावक र उसको नजिकका बुनेजुने परिवारका सदस्यहरूको बारेमा बढी बताउनेछौं।
फ्लोरेन्टिनो लुइसको नजिकको बुनेको परिवारलाई भेट्नुहोस्। के तिनीहरू सँगै सुन्दर देखिदैनन्? ।: IG
फ्लोरेन्टिनो लुइस फादरको बारेमा:
अनुसार गोलको मिडफिल्ड बढावा को विवरण, टिनोका बुबा पहिलो व्यक्ति हुन् जुन फुटबल स्काउट्स पहिलो पटक उसको छोराको सेवाहरू लिन आउँथे। मोरिस लुइस बुबाको जस्तो देखिन्छ जसलाई पनी पारिवारिक सम्बन्धको महत्त्व थाहा छ।
फ्लोरेन्टिनो लुइस ड्याडलाई भेट्नुहोस्। सुपर सामाजिक बुबा एक प्रकारको हो जुन प्रायः मानिसहरूले सपना देख्दछन्। ।: IG
फ्लोरेन्टिनो लुइस आमाको बारेमा:
लौरा लुइस मा पहिलो नजर मा, तपाईं को लागी प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ कति जवान र सुन्दर तिनी हुनुहुन्छ। तल चित्रण गरिएको, सुपर आमाले हरेक डिसेम्बर 6th मा उनको जन्मदिन मनाउँछ, र उनी late० को दशकको अन्ततिर देखा पर्छिन्।
फ्लोरेन्टिनो लुसको आमालाई भेट्नुहोस्। तिनकी सँधै चमकदार आमासँग टीनो थियो जब उनी २० वर्षको उमेरमा थिइन। ।: IG
फ्लोरेन्टिनो लुइस आफ्नो प्रेमिका (ब्रूना) को साथ आफ्नो आमाको सम्मान गर्दछन् आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको रूपमा। तल र माथिको फोटो ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईले यो सत्यता बुझ्नुहुनेछ कि टोनोले उसको आमाको नाक र आँखा पछ्याए।
किन फ्लोरेन्टीनो लुइस मम (लौरा लुइस) यति सहज लाग्ने छैन? जे भए पनि, उनले एक सुन्दर फुटबलर जुटाएर राम्रो काम गरी। ।: Picuki
साथीहरू र परिवारका केही सदस्यहरूले श्रीमती लुइसलाई 'शिक्षक' भनेर सम्बोधन गर्छन्। धेरै जसो फुटबल खेलाडीहरू भन्दा फरक, लोरा इन्स्टाग्राममा सक्रिय छ जहाँ उनलाई 'बक्सिता लुइस' नाम दिइन्छ।
फ्लोरेन्टिनो लुइस भाईको बारेमा:
फुटबलरको एक मात्र भाई छ (करिब दस वर्ष उसको जुनियर) जसलाई उनले पेस्कीको रूपमा वर्णन गर्छन् - जसले समस्या र सँधै कष्टकर पार्छ। तलको फोटोबाट, यस्तो देखिन्छ कि ब्रुनिन्हो एक रमाईलो-प्यारो बच्चा हो, जसले आफ्नो ठूला भाइको साथीलाई माया गर्छ। हामी आशा गर्छौं कि उसले उसको फ्लोरेन्टिनो लुइसको पाइला पछ्याए।
फ्लोरेन्टिनो लुइस ब्रदर, ब्रुनिन्हो लुइसलाई भेट्नुहोस्। परिवारको दोस्रो छोरा जीवन भरिएको देखिन्छ। ।: Picuki
फ्लोरेन्टिनो लुइस बहिनीको बारेमा:
बेल्निरा शिन युवती हो जो लुइस परिवारको अन्तिम जन्मेको बच्चा हुन जान्छ। जुन, सन् २०१ 2017 को वरपर जन्म दिईनाले यो जीवनी (मे २०२०) राख्ने बेलामा उनी years बर्षको उमेर भएकी छिन भन्ने बुझिन्छ। Belnira लुइस तल उनको बुबा, आमा र सुपर ठूलो भाई संग चित्रित छ।
फ्लोरेन्टिनो लुइसको बहिनी, बेलनिरा लुइसलाई भेट्नुहोस्। उसको घरको बच्चाले उनलाई थाहा पाउनेछ कि उसको भाई विश्वको सबैभन्दा राम्रो डिफेन्सी मिडफिल्डर हो। ।: इन्स्टाग्राम
फ्लोरेन्टिनो लुइस हजुरबा हजुरआमाहरूको बारेमा:
डिफेन्सिवल मिडफील्ड प्रोडिजी, कहिलेकाँही मे २०१ 2019 को वरपर, आफ्नो हजुरआमालाई मृत्युको चिसो हातमा हराउँदछ। तल तिनीहरूको फोटोबाट हेराई गरेर, यो पक्का छ कि उनी उहाँको मनपर्ने ग्रानी हुन्। गयो तर बिर्सिएको छैन, उनको आत्मा शान्तीमा रहोस्, आमिन!
फ्लोरेन्टिनो लुस हजुरबा हजुरआमा मध्ये एक भेट्नुहोस्। उनी ढिलो भइसकेकी छिन् र उनको आत्मा पूर्ण शान्तिमा आराम गरोस्। आमेन! ।: Picuki
Florentino लुइस व्यक्तिगत जीवन:
उहाँलाई अझ राम्ररी चिन्न, हामी उसको केही अफ-पिच गतिविधिहरूमा ट्याप गर्न अघि बढ्यौं। र सबैभन्दा पहिला, फ्लोरेन्टिनो लुइस को लागी मान्यता को लागी हो अनौंठो अन्धविश्वास र प्री-म्याच रीतिहरू। महत्त्वपूर्ण खेल हुनु भन्दा पहिले, फुटबलरले आकाशको अनुहारतिर बसेको बानी बसाल्छ। यो कार्य, (तल चित्र) उसले एक ठूलो फाइनल अघि बनाएको थियो।
फ्लोरन्टिनो लुसको व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू। उसको पूर्व खेल अन्धविश्वासी तालिकाले ऊ फुटबलरको एक हेक हो भनेर प्रकट गर्छ। ।: IG
उसको व्यक्तित्वमा, जवानले उदार र न्यानो हृदयको चरित्र प्रदर्शन गर्दछ। यदि फुटबल खेल्ने फेला परेन भने, टिनो पौंडी खेल्ने साथीहरूसँग हुन सक्छ। अन्तमा, उसले लिन मन पर्छ पल पोगाबाउसको कपाल देखिन्छ
Florentino लुइस LifeStyle तथ्यहरु:
उहाँलाई गणना नगर्नुहोस्, जब तपाईं फुटबलरहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ जो केवल पोष्ट रेस्टुरेन्टहरूमा खान्छन्, विशेष कारहरू ड्राइभ गर्दछन्, ठूला घरहरू (मन्सनहरू) छन् र हौट कउचर कपडा लगाउँछन्। रणनीतिक रूपमा परिपक्व मिडफिल्डर, आफैंले आफैंमा पैसा खर्च गर्नुमा होइन।
फ्लोरेन्टिनो लुस लाइफस्टाइल- हो, उसको पहिरनको भावना घर लेख्न केहि पनि होइन, तर नम्र जीवनशैलीको अर्थ के हो फुटबलरको लागि। ।: Picuki
Florentino लुइस तथ्यहरू:
हाम्रो लेखनको अन्तिम चरणमा, हामी तपाईंलाई त्यस्ता तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछौं जुन तपाईंलाई फ्लोरेन्टिनो लुइसको बारेमा कहिल्यै थाहा थिएन। ढिलाइ नगरी, सुरु गरौं
तथ्य # १- फ्लोरेंटीनो लुइस वेतन ब्रेकडाउन
प्रति वर्ष € 312,480 $ 339,145 £ 278,316
प्रति महिना € 26,040 $ 28,262 £ 23,193
प्रति हप्ता € 6,000 $ 6,512 £ 5,344
प्रति दिन € 587 $ 930.3 £ 763.4
प्रति घण्टा € 35,7 $ 38.8 £ 31.8
प्रति मिनेट € 0.60 $ 0.65 £ 0.53
प्रति सेकेन्ड € 0.01 $ 0.01 £ 0.01
यो के हो तपाईंले यो पृष्ठ हेर्न सुरू गर्नुभए देखि फ्लोरेन्टिनो लुइसले कमाएको छ।
तथ्य # १- यस तलबलाई औसत नागरिकको आम्दानीसँग तुलना गर्दै:
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... विश्वविद्यालय पोर्टलको साथ औसत पोर्तगाली नागरिकले प्रतिमाह १€1547 डलर कमाउँछ। यस व्यक्तिले १.1.4 बर्ष काम गर्नु पर्छ जुन फ्लोरेन्टिनो लुइस मासिक तलब (मे २०२० को आंकडा) को स्तरमा पुग्न लगभग एक वर्ष। महिना हुन्छ।
तथ्य # १- फ्लोरेन्टिनो लुइस उपनाम को कारण:
पोर्तुगाली मिडिया उनको रूपमा उल्लेख 'O पोल्भो' (अक्टोपस)। यो उपनाम उसको खुट्टा को लागी आयो, जुन यति लामो छ। यो पनि किनभने फ्लोरेन्टिनोसँग कडा कोणमा सजिलोसँग कब्जा फिर्ता लिनको लागि लामो हात फैलाउने क्षमता छ। पल पोग्बा पनि यो उपनाम बोक्छन्।
तथ्य # १- आफ्नो फिफा तथ्यहरु के भन्छ:
तलको तथ्या .्कहरू बाट, तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि टीनो बिस्तारै एक बन्नको लागि आफ्नो बाटोमा काम गर्दैछ विश्व मा सबै भन्दा राम्रो बचाव मिडफील्डर.
डिफेन्सिवल मिडफिल्डरको फिफा तथ्या .्कले उसको भविष्यको बारेमा धेरै भन्छ। तपाईंले बाहिर हेर्नु पर्छ! 📷: SoFIFA
तथ्य # १- धार्मिक प्रतिबद्धता:
फ्लोरन्टिनो लुइसका आमाबुवाहरूले उनलाई इसाई घरको रूपमा हुर्काए। यद्यपि केही कारणहरूले गर्दा उनले बच्चाको रूपमा बप्तिस्मा लिएनन्। इसाई संस्कारको शुरुवात गर्ने विचार २०२० को शुरुतिर उनले आफ्नो प्रेमिका ब्रूना गुरेरोलाई प्रस्ताव गरे पछि आए।
फ्लोरन्टिनो लुइस धर्म - उनको बप्तिस्माले उनको ईसाईमतको विश्वासको वर्णन गर्दछ। 📷: इन्स्टाग्राम
माथि, फुटबलरको उनको टाउको पानीमा डुबायो (बप्तिस्माको क्रिया) उसको चर्चका सदस्यहरूले। उनको अनुसार बप्तिस्मा लिनु भनेको उसको जीवनको नयाँ सुरुवात हो।
तलको तालिकाले फ्लोरन्टिनो लुइस प्रोफाइललाई संक्षिप्त जानकारीको बिटहरूमा बिच्छेद गर्दछ जुन उनको जीवनीको सारांश दिन्छ।
पुरा नाम: फ्लोरेन्टीनो इब्रिन मॉरिस लुइस।
जन्मे: १ August अगस्त १ 19 1999। लिस्बन, पोर्चुगलमा।
अभिभावक: लौरा लुइस (आमा) र मोरिस लुइस (पिता)।
पारिवारिक मूल: अंगोला।
Siblings: ब्रुनिन्हो लुइस (भाइ) र बेलनिरा लुइस (बहिनी)।
पत्नी: ब्रूना गुरेरियो (पूर्व प्रेमिका)
उचाइ: १.1.84 मीटर (मीटरमा) रfफिट ० इन्च (फिट र इन्चमा)
शिक्षा: टेरेना (फुटसल)
उपनाम: 'O पोल्भो' (अक्टोपस)
फ्लोरेन्टिनो लुइस बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा हाम्रा बारे मा विस्तृत लेख पढ्न को लागी धन्यवाद। हाम्रो लागि यो युवा सफलताको लागि गन्तव्य हो र कुनै समय बितिसकेको छैन, विगतको बेनफिका स्टारलेट्स - एडरसन, बर्नार्डो सिल्भा, आन्द्रे गोम्स, जोओ क्यान्स्लो र जोओ फेलिक्सको पछिको अनुसरण गर्न।
कृपया हामीलाई बताउनुहोस्, टिप्पणी सेक्सनमा, तपाईं फ्लोरेन्टिनो लुइसको हाम्रो लेखको बारेमा के सोच्नुहुन्छ जुन भविष्य अविश्वसनीय रूपमा उज्यालो छ। उदाहरणको लागि, ऊ N'golo कांटे भन्दा परेको जस्तो देखिन्छ?